🥇 Bona IBHOLA KU-inthanethi MAHHALA « Amakhasi Angcono Kakhulu » Bukhoma
Indlu kaTiki Taka
Ungalibuka kanjani ibhola ku-inthanethi?
Ukuze ubuke ibhola bukhoma ku-inthanethi, asikho isidingo sokuthi siye kumawebhusayithi ajwayelekile ebhola. Ngokuya nje emakhasini ezemidlalo singakwazi ukwanelisa izidingo zethu. Kodwa kungani kunconywa? Kulula kakhulu: ukusakazwa kwemidlalo yebhola lezinyawo ezingosini zezemidlalo kuthembekile kubasebenzisi bazo ngoba lokho kwethembeka kubavumela ukuthi bathole imali.
Kulezi zindawo ngeke ukwazi ukubuka ibhola kuphela, kodwa uzokwazi bukela ithenisi ku-inthanethi, umjaho wefomula 1 futhi of MotoGP.
Amakhasi amahle kakhulu ongabuka ibhola ku-inthanethi mahhala
Siyazi mathupha ukuthi kuxaka kangakanani kwesinye isikhathi ukubuka ibhola ku-inthanethi mahhala ngokusesha okusheshayo ku-inthanethi. I-Google isinikeza izinketho eziningi, futhi lapho ekugcineni sithola iwebhusayithi efanelekile yethu, umdlalo usuvele uphelile.
Ukuze ugweme le nkinga, nalu uhlu lwe amakhasi amahle kakhulu ongabuka ibhola ku-inthanethi mahhala:
» Umama HD
Lesi ngesinye sezingosi zebhola likanobhutshuzwayo ezithandwa kakhulu ngenxa yokusebenziseka kalula, ukuguquguquka, kanye nezinhlobonhlobo zezinketho zemidlalo. Ibhola likaMama le-HD ingenye ye- ama-portal okufanele uwacabangele uma uthanda ukubuka ezemidlalo bukhoma.
» Phila i-TV
Ikhasi elingasho lutho ongalikwazi buka amameshi akho owathandayo ebhola nganoma isiphi isikhathi, noma kuphi nje ngokuba i-smartphone noma i-PC yakho ixhumeke ku-inthanethi ongakwazi ukuyifinyelela.
» Okubomvu okuqondile
Yize leli khasi libe nezinkinga eziningi mayelana namalungelo okudlulisela, lisaqhubeka ukuhlanganisa ubuholi bayo ebholeni lamahhala le-inthanethi. Okubomvu okuqondile uyaqhubeka nokuzama ukuba ngomunye wababhekiseli ezingosini zebhola lezinyawo eziku-inthanethi.
» Indlu kaTiki Taka
Kuleli khasi singakwazi bukela ibhola lamahhala bukhoma ngokusebenzisa inhlobonhlobo yezixhumanisi nezinketho. Ku Indlu kaTiki Taka singathola amaligi ongawabona kule webhusayithi abaluleke kakhulu eYurophu: iSpanishi, isiNtaliyane, isiNgisi, isiFulentshi nesiJalimane.
» IPirlo TV
Leli khasi libhekwa njengelinye elingcono kakhulu lokubuka ibhola lamahhala ku-inthanethi. Ungaphuthelwa imidlalo engcono kakhulu yemidlalo, thola konke mayelana IPirlo TV ekuhlaziyeni kwethu.
» Ibhola lezinyawo ku-TV
Leli khasi liqukethe a ishejuli egcwele yemidlalo yeligi, lapho uzothola khona iligi ye-Santander, i-Copa del Rey, i-Champions League, kanye nazo zonke izigaba zebhola laseSpain.
Leli khasi ngokuqinisekile linegama elingajwayelekile lewebhusayithi yebhola lezinyawo. Noma kunjalo, I-BatmanStream izokuvumela ukuthi uthole izixhumanisi lapho ungabuka khona okufanayo football online mahhala futhi uphile, ngaphandle kwesidingo ukulanda lutho.
Sincoma ukuthi ubheke isibuyekezo sethu se Okuhlangene ukuze wazi izindawo ezingcono kakhulu lapho ujabulele umdlalo owuthandayo.
Thola ibhola elihamba phambili lamazwe ngamazwe kuleli khasi. Konke imidlalo yeqembu lakho olithandayo kanye nezinhlobonhlobo ezinkulu zezixhumanisi ozozithola kulokhu Ezemidlalo.
Ibhekwa njengenye yamawebhusayithi okusakaza ezemidlalo ahamba phambili, anekhalenda kanye zonke izinhlobo zezemidlalo ezitholakalayo. Siyahlaziya SoccerArg ukuze ukwazi ukubukela ibhola lezinyawo elingcono kakhulu mahhala.
Le portal ingenye ye amareferensi ukubuka ibhola online. Zitholele okusha EliteGol nokuthi ungaphuthelwa kanjani i-Real Madrid-Barcelona ngokuhlaziywa esikunikeza kona.
Amawebhusayithi akhokhelwa kakhulu ukuze ubuke ibhola ku-inthanethi
Leli khasi liyatholakala ku-Smart TV, IOS, Android, PC/Mac, Play Station kanye ne-Chromecast.
» I-Movistar Champions League
Leli khasi limayelana nesiteshi esikhokhelwayo sokubuka iChampions League ne-European League.
» Ibhola le-Orange TV
Ku-Orange TV ungabuka lonke ibhola ku-inthanethi olifunayo kumaligi ahlukene nangezinhlelo zokudlulisela.
Iliphi ikhasi elingcono kakhulu lokubuka ibhola mahhala?
Kuyo yonke i-inthanethi singathola amakhasi ahlukene lapho singabuka khona ibhola ku-inthanethi, kodwa ungakwazi ngempela ukubuka imidlalo ngaphandle kokusikeka? Ngezansi siqoqa izindawo ezinhle kakhulu zokubuka ibhola ku-inthanethi mahhala ngaphandle kokusikeka. Ngoba ayikho into ecasula ukwedlula ukubuka ithimba lethu esilithandayo futhi ukusakazwa kuqala ukuma, kubangele ukujeqeza nentukuthelo.
Ukugwema lokho kudonsa, sihlanganise amaseva angcono kakhulu, iningi lawo bamahhala futhi basebenzisa izinsiza ezimbalwa, ukuze ukwazi ukubuka yonke imidlalo ku-inthanethi ngaphandle kweziphazamiso. Zombili izinsiza zamahhala nezikhokhelwayo seziphenduke indlela engcono kakhulu yokubuka iqembu lakho lidlala, mhlawumbe ngenxa yokuthi ukwenye indawo noma ngoba ufuna ukubuka imidlalo usekhaya ngqo ngaphandle kokushiya igumbi lakho lokuphumula, lezi zindlela zokusakaza ku-inthanethi (bukhoma ku-inthanethi) yizona ezinconywa kakhulu.
Amawebhusayithi amaningi esingawathola wokubuka imidlalo yebhola awanayo ikhwalithi yesithombe edingekayo futhi ukusakazwa kuyama njalo kabili kathathu. Ngaphezu kwalokho, bakugcwalisa ngokukhangisa noma awukwazi ukuthola yonke imidlalo.
Ngaleso sizathu sine ihlanganise amanye amakhasi lapho ungeke ube nalolo hlobo lwenkinga ngokuphazima kweso ukuze ukwazi ukubukela ibhola ngokunethezeka kukasofa wakho ekhaya.
TOP 5 Amakhasi Angcono Kakhulu Okubuka Ibhola Ku-inthanethi
Lapha unayo ifayela le- Phezulu kwamakhasi ahamba phambili okubuka ibhola lezinyawo. Ngamunye unezinzuzo zawo futhi ngenxa yalokho ungakwazi khetha leyo evumelana kangcono nezidingo zakho ngaso sonke isikhathi. Lawa amakhasi anconyiwe kakhulu ongawabuka bukhoma ibhola lezinyawo:
Ungathola ibhola elihle kakhulu ngaphandle kokushiya ikhaya
Le webhusayithi inesevisi yenkokhelo yanyanga zonke lapho ungabhalisela khona ukubuka ibhola bukhoma. Isevisi ibilokhu isemakethe isikhathi esincane kunezinye zesitayela esifanayo, kodwa noma kunjalo iye yakwazi ukuhambisana nezinkulu kakhulu.
Ine- ukusebenza okuhle nokusekelwa okunethezeka kwezobuchwepheshe, ngakho-ke ngeke ube nokwehluleka ngesikhathi sokusakaza okubukayo. Ngaphezu kwalokho, eyakhe amaphekhi okufanisa aphelele kakhulu futhi sizokwazi ukuthola amaligi avela emhlabeni wonke.
Enye yezinzuzo ezinkulu kakhulu, ukuthi inakho ukusekelwa kwamadivayisi eselula namathebulethi, ukuze ukwazi ukuthatha ibhola nawe noma kuphi.
Phakathi kwamashaneli akho Inalokhu okulandelayo:
Kube La Liga
I-BeIN LaLiga 4K
Sibheka lokhu njengenye yezinketho zokukhokha ezingcono kakhulu uma singafuni ukuphuthelwa yinoma yimuphi umdlalo weqembu lethu esiyintandokazi kuyo yonke imiqhudelwano.
Yimiphi imidlalo esingayibona ku-Roja Directa?
Le nkundla yebhola ebukhoma ingenye eyaziwa kakhulu ukubuka umentshisi mahhala. Naphezu kokuthi isineminyaka eminingi isebenza, ibilokhu ishintsha isizinda sayo ngokuqhubekayo.
Kule webhusayithi singathola yonke imidlalo yebhola lezinyawo amaligi ahamba phambili emhlabeni, ngaphezu kokubona eminye imikhakha yezemidlalo njenge-tennis, i-basketball noma imidlalo yezimoto.
Uma ufuna ukwazi okwengeziwe nge-Roja Directa, sincoma ukuthi uhlole yethu Ukuhlaziya okuphelele.
Unalo lonke ibhola ku-Movistar
Kucatshangwa abaningi njengesevisi engcono kakhulu yokubuka ibhola ngaphandle kwezinkinga zokutholakala, ngokungangabazeki inketho yokucabangela. Sekuyiminyaka isemakethe futhi iyaqhubeka nokuba enye ye izinketho eziphelele kakhulu nezingcono zokubuka ibhola ku-inthanethi ngaphandle kokusikeka.
Itholakala kusevisi yokukhokha yanyanga zonke, i-Movistar inikeza okuhle ukuhlukahluka kwemidlalo namaligi ahlukahlukene nemiqhudelwano evela emhlabeni wonke. Kuwebhusayithi yayo ungabhalisa futhi wenze inkontileka nezinsizakalo zayo ukuze ukwazi ukujabulela lonke ibhola layo
Phakathi kwe iziteshi ezitholakalayo enikezwa yi-Movistar enkonzweni yayo ihlanganisa okulandelayo:
ILaLiga Santander, nomdlalo omuhle ufakiwe neminye imidlalo yosuku
INdebe Yenkosi ephelele
I-UEFA Champions League kanye ne-UEFA Europa League
Yonke iLaLiga 123
Izinga eliphezulu lamazwe ngamazwe afana nePremier League, iBundesliga, iCalcio namanye amaningi
Thola umdlalo weqembu lakho eliyintandokazi ku-Batman Stream
Le nkundla yebhola lezinyawo ebukhoma yamahhala ingenye yezinketho ezinhle kakhulu lapho. Njengoba kuneziteshi ezingaphezu kuka-30 zokubuka ibhola likanobhutshuzwayo kuwo wonke amaligi omhlaba, ngaphezu kwemidlalo yosuku, singathola amahora ezemidlalo nsuku zonke. Ingabe a Iwebhusayithi ezinzile, esabelayo lapho ungabuka khona ibhola mahhala neminye imidlalo ephuma kukhompuyutha yakho, iselula noma ithebhulethi ngaphandle kwezinkinga.
Inokukhangisa futhi kungase kudingeke ulinde imizuzwana embalwa ngaphambi kokuthi uqale ukubuka okufanayo okukhethiwe, kodwa uma isikhangiso sesidlulile, ungajabulela ukusakaza mahhala futhi ngaphandle kweziphazamiso.
Uma ufuna ukwazi okwengeziwe ngale portal ukuze ubuke ibhola une yethu Isibuyekezo esigcwele kusixhumanisi esingezansi.
Ingabe usukulungele ukuthola yonke imidlalo ongayibuka ku-Elitegol?
Le portal ine okuqukethwe ku-inthanethi, kokubili okubukhoma nokuhlehlisiwe kusuka kuwo wonke amaligi emhlabeni. Ungabuka imidlalo yebhola bukhoma noma irekhodwe futhi uyilande noma kunini ukuze ungaphuthelwa nomzuzu owodwa.
Inenani elikhulu leziteshi zokujabulela imidlalo yamahhala yebhola ku-inthanethi. Ngabe kunjalo atholakalayo wonke amaligi nezinkomishi ezibalulekile emhlabeni futhi uma kubanjwa izindebe zomhlaba noma i-European Championships, ungakwazi futhi ukujabulela imidlalo yazo.
Nasi isibuyekezo sethu esigcwele mayelana nale portal ukuze ubuke ibhola mahhala.
Iziphetho zokubona i-Soccer Online ngaphandle kokusikeka
Kungakhathaliseki ukuthi ukuphi, uma okufunayo ujabulele ikhompuyutha yakho nganoma yisiphi isikhathi sosuku, Uzokwazi ukukwenza kuwo wonke amawebhusayithi alesi Phezulu.
Ngenxa yalokhu uzokwazi ukujabulela ku-inthanethi, bukhoma futhi mahhala kuyo yonke imidlalo ngaphandle kokusikeka. Lawa mawebhusayithi abuyekezwa nsuku zonke futhi akunikeza okuqukethwe okusha ukuze uthole okufunayo ngaso sonke isikhathi.
Sikukhumbuza ukuthi lolu hlu lunolwazi kuphela ukuze ufunde ngamasevisi anikezwayo.
Izincomo nezexwayiso mayelana nokubuka ibhola ku-inthanethi
Impela uyakwazi kodwa kulula ukugcizelela kukho: uma ungenalo uxhumano oluhle, noma yimuphi umdlalo uzoba ikhanda elibuhlungu.
Lungiselela umdlalo wakho we-inthanethi ngokuhamba kwesikhathi. Ngalokhu sisho ukuthi awukushiyi ukuthunyelwa ngomzuzu wokugcina kodwa ukuthi uhlola inkundla yakho kusenesikhathi.
Amanye amawebhusayithi amahhala anikeza ileveli yekhwalithi ephansi kunezinketho ezikhokhelwayo, ngaphezu kokusebenzisa ngokweqile ukukhangisa.
Bheka inketho engcono kakhulu kusengaphambili futhi uhlale naye uma kungenzeka.
Ucabanga ukuthi kungaba usizo kumuntu? Sisize sifinyelele abantu abaningi, kufanele uchofoze inethiwekhi yakho yokuxhumana nabantu oyintandokazi futhi yikho!
11 Januwari, 2020, 10: 41 pm
Siyabonga ngolwazi. Umnikelo omkhulu wale webhusayithi. Sanibonani!
Juni 4, 2021, 1: 45 am
Umnikelo mkhulu. Thola ukubingelela okufudumele.
Izindlela zokubuka ibhola ku-inthanethi